နိူင်ငံတော် သစ္စာဖောက် မှု လို့ ကြေညာခြင်း ရဲ့ နောက်ကွယ် က DR.SASA ရဲ့ လုပ် ဆောင် နိုင်စွမ်း တွေ – GaMone Media
Homepage / Local News / နိူင်ငံတော် သစ္စာဖောက် မှု လို့ ကြေညာခြင်း ရဲ့ နောက်ကွယ် က DR.SASA ရဲ့ လုပ် ဆောင် နိုင်စွမ်း တွေ
နိူင်ငံတော် သစ္စာဖောက် မှု လို့ ကြေညာခြင်း ရဲ့ နောက်ကွယ် က DR.SASA ရဲ့ လုပ် ဆောင် နိုင်စွမ်း တွေ
နိူင်ငံတော် သစ္စာဖောက်မူလို့ ဘာကြောင့် ကြေငြာသလဲ? ရဲ့နောက်ကွယ် က အထိနာနေတဲ့ အကြောင်းအရင်း Dr.sasa ကို အရင်က မသိရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဟိုက ကမ္ဘာ့ နယ်ဖယ်အသီးသီးက ထိပ်တန်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှင့် အဂ်လိပ်လိုပဲ ပြောနေ ကြတော့ သူတို့ နားမလည်နိူင်ဘူး။သူတို့ ပထွေး တရုတ်က တဆင့် ပြန်ပြောပြ..နေလို့ အခုမှ ဒေါက်ဆာဆာ ဘာလုပ်နေသလဲ သိလာကြတယ်။Dr.sasa ဘာကြောင့် ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ရသလဲ? နိူင်ငံတော် သစ္စာဖောက်မူလို့ ဘာကြောင့် ကြေငြာသလဲ?အဖြေက ရှင်းပါတယ်.ဒေါက်တာဆာဆာ လုပ်ဆောင်သမျှ အောင်မြင်နေလို့ ဒေါက်တာဆာဆာ လုပ်ဆောင်သမျှ သူပုန်အဖွဲ့ အထိနာစေလို့…စစ်သူပုန်ဘက်က
စွဲဆွဲ ချက်(၇)ချက် စလုံးဟာထိရောက် အောင်မြင်ပြီး အာဏာရူးတွေ အထိနာနေကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။‌၁။ CRPH လည် အောင်မြင်မူ ရရှိနေတယ်။၂။ ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းက သံရုံး CDM လူပ်ရှားမူလည် အောင်မြင်နေတယ်။.‌၃။ကမ္ဘာ့နိူင်ငံအသီးသီးက သူ တို့ငွေ ပိတ်ဆို့မူတွေလဲ အောင်မြင်နေတယ်။၄။ တိုင်ရင်းသား စည်းရုံးမူလည် အောင်မြင်နေတယ်။..
၅။ နက်လက် ဝယ်ယူခွင့် ပိတ်ဆို့မူလည် အောင်မြင် နေတယ်.၆။ R2P ကိစွလည် အောင်မြင်နေတယ်။ ၇။သူပုန် စစ်ကောင်စီ ဖြတ်သိမ်းဖို့လည် အောင်မြင်နေတယ်။သူတို့ မသိထားတဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ကိုလည်း ဒေါက်တာဆာဆာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒေါက်ဆာဆာ ကလည် ပြည်သူတွေကို ကတိပေးထားပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် အရေးတော်ပုံ အောင်ကို အောင်ရမည်။ဒေါက်တာဆာဆာလုပ်ဆောင်သမျှ အောင်မြင်ဖို့ ဆက်လက် ဆုတောင်းရအောင်.
ႏိူင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မူလို႔ ဘာေၾကာင့္ ေၾကျငာသလဲ? ရဲ႕ေနာက္ကြယ္ က အထိနာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း Dr.sasa ကို အရင္က မသိရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဟိုက ကမာၻ႔ နယ္ဖယ္အသီးသီးက ထိပ္တန္း ပုဂၢိဳလ္ေတြႏွင့္ အဂ္လိပ္လိုပဲ ေျပာေန ၾကေတာ့ သူတို႔ နားမလည္ႏိူင္ဘူး။သူတို႔ ပေထြး တ႐ုတ္က တဆင့္ ျပန္ေျပာျပ..ေနလို႔ အခုမွ ေဒါက္ဆာဆာ ဘာလုပ္ေနသလဲ သိလာၾကတယ္။Dr.sasa ဘာေၾကာင့္ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ရသလဲ? ႏိူင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မူလို႔ ဘာေၾကာင့္ ေၾကျငာသလဲ?အေျဖက ရွင္းပါတယ္.ေဒါက္တာဆာဆာ လုပ္ေဆာင္သမွ် ေအာင္ျမင္ေနလို႔ ေဒါက္တာဆာဆာ လုပ္ေဆာင္သမွ် သူပုန္အဖြဲ႕ အထိနာေစလို႔…စစ္သူပုန္ဘက္က
စြဲဆြဲ ခ်က္(၇)ခ်က္ စလုံးဟာထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီး အာဏာ႐ူးေတြ အထိနာေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။‌၁။ CRPH လည္ ေအာင္ျမင္မူ ရရွိေနတယ္။၂။ ကမာၻ႔တစ္ဝွမ္းက သံ႐ုံး CDM လူပ္ရွားမူလည္ ေအာင္ျမင္ေနတယ္။.‌၃။ကမာၻ႔ႏိူင္ငံအသီးသီးက သူ တို႔ေငြ ပိတ္ဆို႔မူေတြလဲ ေအာင္ျမင္ေနတယ္။၄။ တိုင္ရင္းသား စည္း႐ုံးမူလည္ ေအာင္ျမင္ေနတယ္။..
၅။ နက္လက္ ဝယ္ယူခြင့္ ပိတ္ဆို႔မူလည္ ေအာင္ျမင္ ေနတယ္.၆။ R2P ကိစြလည္ ေအာင္ျမင္ေနတယ္။ ၇။သူပုန္ စစ္ေကာင္စီ ျဖတ္သိမ္းဖို႔လည္ ေအာင္ျမင္ေနတယ္။သူတို႔ မသိထားတဲ့ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုလည္း ေဒါက္တာဆာဆာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ ေဒါက္ဆာဆာ ကလည္ ျပည္သူေတြကို ကတိေပးထားၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ကို ေအာင္ရမည္။ေဒါက္တာဆာဆာလုပ္ေဆာင္သမွ် ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆက္လက္ ဆုေတာင္းရေအာင္.
Previous post မကြီးစိုး တို့ အမေ ရဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်း ကြောင့် အံအားသင့် သွားကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များ
Next post ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းကိုစည်သူ ရဲ့ နာရေးကို ကိုယ် တိုင် သွားရောက်ပြီး အလှူငွေနဲ့လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်း ခဲ့ တဲ့ ဟိန်းဝေယံ